विचित्र संसार Archives - Wnepal.com
रिसको झोँकमा मानिसले के सम्म गर्दैन ! न्युजिल्याण्डमा एक युवतीले आफ्नै लोग्नेलाई बिक्रि गर्नका लागि अनलाइनमा लिलामीमा राखिन् । घरमा सल्लाह नगरीकनै सधै एक्लै घुम्न निस्कने आफ्नो पतिदेवमाथि रिस पोख्नका लागि ती महिलाले लोग्नेलाई अनलाइन लिलामीमा राखेकी हुन् । बच्चाको स्कुल विदा भएको समयमा पत्नी र बच्चालाई घरमै छाडेर एक्लै माछा मार्ने रमाइलो सहितको घुमफिरमा […]
दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुको चर्चित पर्यटकीय स्थल माचु पिच्चु विश्वका सात आश्चर्यमध्ये एउटा हो । माचु पिच्चु क्षेत्र इंका सभ्यताको निशानी पनि हो । कोरोना भाइरस महामारीको फैलावटलाई रोकनका लागि पेरुमा लगाइएको लकडाउनका कारण माचु पिच्चुपनि बन्द छ । तर हालै उक्त सातौँ आश्चर्य केवल एकजना पर्यटकका लागि मात्र खुल्ला गरिएको छ । समाचार अनुसार […]
निलो प्रकाश दिने चश्मा निन्द्रा र कार्यक्षमताका लागि फाइदाजनक तथा सहयोगी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण विश्वभरीका मानिस घरमै बसेको बेला विद्युतीय सामग्रीहरुको स्कृनमा धेरै हेर्न थालेको बेला यस्तो अध्ययनको निश्कर्ष सार्वजनिक भएको हो। काम गर्ने वा समय कटाउने प्रयोजनका लागि मोवाई, कम्युटर, टिभीलगायतका विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रयोग बढेको पाइएको छ । […]
अभिनेत्री कंगना रनौत आजकल आफ्नो फिल्म थलाइवी को शूटिंगमा व्यस्त छिन्। जयललिताको भूमिकामा खेल्न कंगनाले आफ्नो लुकमा धेरै मेहनत गरिरहेकी छिन्। यस चलचित्रका लागि उनले २० किलो तौल बढाएकी छन् । तर अहिले फिल्म निर्माण भने सकिन लागेको छ । त्यसैले उनी फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहन्छिन् । जसका कारण उनले आफुलाई धेरै मेहनत गरीरहेकी […]
सेल्फी क्रेज हरेक मानिसमा पाईन्छ । चाहे त्यो बच्चा होस, चाहे किशोर किशोरी वा चाहे पाको उमेरका ब्यक्ति नै किन नहुन् ? कुनै सुन्दर ठाउँमा पुग्दा होस वा नजिकका आफन्त भेट हुँदा वा कुनै सेलिब्रटी भेटिँदा मोबाईल निकालेर सेल्फी खिच्न जो कोहीलाई बानी नै भईसकेको छ । मोबाईलको विकसितरुपसँगै सुधारित पिक्चर क्वालिटीले नै मानिसलाई सेल्फी […]
मानिसहरुले जस्तो काम पनि गरिररहेका हुन्छन् । काम अनुसार पैसा पनि थारै र धेरै हुने गर्छ । भनिन्छ काम ठूलो र सानो हुँदैन । यस्तै सानो कामबाट शुरु गरेमा भोली ठुलो हुँदै जान्छ । सानै कामबाट पनि धेरैले राम्रो कमाई गरिरहेका छन् । जुत्ता पालिस गर्ने काम हामी धेरै नै सानो मान्छौ । तर जुत्ता […]
कोरोनाको महामारीले विश्वभर १ खर्बभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । यसबेला मानिस रोजगारीको खोजीमा छन् । तर मानिसले खाने जागिर कुनै बिरालोलाई दिइयो भन्दा पत्याउनु हुन्छ ? त्यो पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी । अस्ट्रेलियाको रिचमण्ड शहरको एपवर्थ हस्पिटलमा एक बिरालोलाई सुरक्षागार्डको जिम्मेवारी दिइएको छ । शहरको एक आवारा बिरालोलाई शहरको सेक्युरीटी टिमले […]
‘गान्धी चस्मा’को साढे ३ करोड
‘भारतका पिता’ भनि ख्याति कमाएका र अहिंसा आन्दोलनबाट भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन सफल महात्मा गान्धीको चस्मा साढे ३ करोड रुपैयाँ बढीमा बिक्री भएको छ । बेलायतको लिलामी संस्था इस्ट ब्रिस्टल अक्सन्सले गरेको बोल बढाबढ लिलामीमा गान्धीको चस्मालाई अमेरिकी नागरिकले २ लाख ६० हजार पाउण्ड अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ३ करोड ६६ लाख ६० हजारमा खरिद गरेका हुन् […]
एक बोतल वाइनको मूल्य कति पर्ला ? युरोपेली देश हंगेरीमा एक बोतलकै झण्डै आधा करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने वाइन उत्पादन भएको छ । हंगेरीको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल टोकजस्थित एक मदिरा उत्पादक कम्पनीले दुनियाँकै महँगो वाइन तयार गरेको छ, जुन वाइनको डेढ लिटरको बोतलको मूल्य ४५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पर्दछ । उक्त वाइनको नाम इसेन्सिया २००८ […]
महिला कर्मचारीसँग डेटिङमा गएपछि सीईओको जागीर चट्
म्याक्डोनल्ड्सले एक कर्मचारीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको पाइएपछि आफ्ना प्रमुख कार्यकारी स्टीभ इस्टरब्रुकलाई जागिरबाट हटाएको छ।अमेरिकी प्रसिद्ध रेस्टुराँको सञ्जालले दुई जनाबीचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित भए पनि इस्टरब्रुकले ‘कम्पनीको नीति उल्लङ्घन गरेका’ र ‘कमजोर निर्णय क्षमता देखाएका’ बताएको छ। कर्मचारीहरूलाई पठाएको एउटा इमेलमा ब्रिटिश नागरिक इस्टरब्रुकले ती महिला कर्मचारीसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्ध रहेको स्वीकार्दै आफूले गल्ती गरेको बताएका छन्। […]
मानिस आफूलाई मनपर्ने जोडीसँग बिहे गर्नका लागि अनेकौं सीमाहरु पार गर्ने गर्दछन् । तर अमेरिकाको टेक्सासमा बस्दै आएका एक व्यक्तिले आफ्नो मग्नीसँग बिहे गर्नका लागि बैंक नै लुटेका छन् । ह्युस्टनभन्दा करीब १२० किलोमिटरको दुरीमा रहेको ग्रोवेटनमा ३६ वर्षीय हिथ बन्पसले आफ्नो बिहेको खर्च उठाउनकाृे लागि भन्दै बैैंकमा चोरी गरेका छन् । खासगरि हिथसँग औंठी […]
२७ वर्षको उमेरमै सबैभन्दा धनी
२७ वर्षको उमेरमा रोशनी नादार भारतमा सबैभन्दा धनी महिला बनेकी छन् । ३७ वर्षे नादार एचसीएल इन्टरप्राइजेज कम्पनीको सीइओ हुन् । उनीले सीएनबीसी न्यूज च्यानलमा इन्टन रही काम समेत गरेकी थिइन् । उनीसँग ६० हजार करोड रुपैयाँ सम्पत्ति छ । रोशनीले कम्पनी मात्रै चलाउँदिनन उनी शिव नादार फाउण्डेसनको शिक्षा अभियानमा समेत योगादन पुर्याउँछिन । भारतीय […]
पब्जी खेल्न व्यस्त भएपछि…..
मोबाइलको खेलिने पब्जी नामक खेल जुन विश्व प्रसिद्ध नै भएको छ । तर हाल नेपाल, भारत लगातका केही देशमा यो खेललाई बन्देज लगाईएको छ । यो खेलको यति सम्म मानिसहरु फ्यान भएका छन् किन आफू कहाँ के गर्दैछु भन्ने पनि बिर्सिन्छन् । यस्तै आजकल सोसल मिडिया टिकटक अहिले विवाह मण्डपमा पब्जी खेली रहेको भिडियो सर्वजनिक […]